हुवावेले ल्यायो सबैभन्दा महंगो स्मार्टफोन - Prawas Khabar
हुवावेले ल्यायो सबैभन्दा महंगो स्मार्टफोन
चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनी हुवावेले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महंगो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ ।
हालै एप्पललाई पछि पार्दै विश्वको दोश्रो ठूलो स्मार्टफोन कम्पनी बन्न सफल हुवावेले महंगो स्मार्टफोनको सूचिमा पनि एप्पललाई नै पछि पार्दै पहिलो स्थानमा उक्एिको हो ।
हुवावेले मंगलबार बेलायतको लण्डनमा आयोजित विशेष समारोहमा आफ्नो फ्लागसीप Mate 20 स्मार्टफोन लञ्च गरेको हो । हुवावेले मेट ट्वान्टी सिरिजका चारवटा मोडेल सार्वज्निक गरेको छ । जसमध्ये Mate 20 RS स्मार्टफोन सबैभन्दा महंगो रहेको छ ।
उक्त स्मार्टफोनको सुरुवाती मूल्य १६ सय ९५ युरो तोकिएको छ । मेट ट्वान्टी आरएसमा ८ जिबीको र्याम, २५६ जिबीको स्टोरेज रहेको छ । त्यस्तै ८ जिबी र्याम र ५१२ जिबी स्टोरेज सहितको मोडेल नोभेम्बरमा उपलब्ध गराइने र त्यसको बेस प्राइस २ हजार ९५ युरो हुने हुवावेले जनाएको छ ।
यसअघि सबैभन्दा महंगो स्मार्टफोनको रुपमा आइफोन एक्सम्याक्स रहेको थियो । ६४ जिबी स्टोरेज क्षमताको आइफोन एक्स म्याक्सको बेस प्राइस १६ सय ४९ रहेको छ ।
हुवावेको यो सर्वाधिक महंगो स्मार्टफोनको सबैभन्दा विशेष भनेको यसको डिजाइन नै रहेको छ । स्मार्टफोनको विशेष डिजाइनका लागि हुवावेले जर्मन कम्पनी प्रोस्चे डिजाइनसँग सहकार्य गरेको छ । यसअघि मेट नाइन स्मार्टफोनका लागि पनि हुवावेले उक्त जर्मन कम्पनीसँग सहकार्य गरेको थियो ।
नयाँ स्मार्टफोनमा पछिल्लो भागको बीच भागमा कालो काँच तथा साइडमा टेक्स्चर्ड लेदर रहेको छ ।
यो स्मार्टफोनमा ६.३९ इन्चको कभर््ड ओएलइडी स्क्रिन रहेको छ जसको रिजोलुसन ३१२० गुणा १४४० पिक्सेल रहेको छ । यसमा हुवावेकै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा किरिन ९८० र माली जी ७६ चिपसेट रहेको छ ।
यसमा इनस्क्रिन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, थ्री डी फेसियल अनलक सपोर्ट था बोन भ्वाइस आइडी फिचर रहेको छ । साथै फास्ट चार्ज सपोर्ट सहितको ४२ मिली एम्पियर आवर क्षमताको ब्याट्री पनि रहेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण फिचर भनेको वायरलेस रिभर्स चार्जिङ पनि हो । यो फिचरका कारण यस स्मार्टफोनलाई अन्य क्यू आइ इनेबल्ड डिभाइसको चार्जिङ प्याडको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यो स्मार्टफोनमा २४ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा रहेको छ ।
पछाडिको भागमा तिनवटा क्यामरा रहेका छन् । जसमा एउटा ४० मेगापिक्सेल, दोश्रो २० मेगापिक्सेल र तेश्रो ८ मेगापिक्सेलको लेन्स रहेको छ ।
यो स्मार्टफोन पानी र धुलो प्रतिरोधी रहेको दाबी गरिएको छ । एजेन्सी
सडक दुर्घटनामा धादिङः ३ वर्षमा ३ सयको ज्यान गयो
‘को बन्छ करोडपति’ नोभेम्बरबाट सुरु हुँदै
ओलि देउवा जस्ता नेता होइनन्-डा. के.सी.
सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त दुबईमा पक्राउ, गोरेका भाई रमेशलाई पनि ल्याइँदै
दुर्घटनाग्रस्त तारा एयर पाँच महिनापछि उडान
कुवेतबाट फर्किएकि श्रीमतिलार्इ तँ अरवीकाे माल हाेस, यता नअाइज, एड्स सर्छ भनेपछि…!!
दशैंको नरमाइलो पाटो : युवा विदेशमा, मदिरा गाउँ–गाउँमा